आईसोलेशन बेड बनाउन स्थानीयद्वारा विरोध, कोरोना संक्रमित क्वारेन्टाईन मै बस्न बाध्य « Janata Samachar
आईसोलेशन बेड बनाउन स्थानीयद्वारा विरोध, कोरोना संक्रमित क्वारेन्टाईन मै बस्न बाध्य
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीमा कोभिड–१९ लाई लक्षित गरी बनाउने आईसोलेशन बेडको उचित ठाउँ नभएको भनी स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । रामग्राम नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ स्थित पाल्ही क्पाम्पसमा आईसोलेशन बेड बनाउने तयारीलाई स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।
बस्तीको नजिक भएकाले जोखिम बढ्ने भन्दै जितपुरका स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । आईसोलेशन बेडमा कोरोना संक्रमितलाई नै राख्ने भएकाले त्यसबाट जितपुरका स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ति संक्रमितबाट बस्तीमा पनि सर्न सक्ने भन्दै पाल्ही क्याम्पसमा कुनै हालतमा आईसोलेशन बन्न नदिने स्थानीय समाजसेवी चौथीप्रसाद कोहांरले बताउनुभएको छ ।
जिल्लास्तरी कोरोना आईसोलेशन बेड बनाउने समाचार सुनेपछि स्थानीयहरु त्रसित र अतांकित बन्न गए, जसको कारणले हामीले क्याम्पस भवन अगाडि नै विरोध जनाएका छौं कोहारले भन्नुभयो । जितपुरका स्थानीयहरुले नगरपालिकाले अन्य ठाँउ नपाएको हो र ? यहाँ बनाउन थालेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । कहाँ जोखिम हुन्छ र कहाँ हुँदैन भनेर नगरपालिकाले सोच्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
रामग्रामका दुई संक्रमित क्वारेन्टाईन मै
यस्तै हिजो मात्रै पश्चिम नवलपरासीमा ३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । सिमावर्ती गाउपालिका सुस्ताको वडा नं. ५ का ३३ वर्षीय एक पुरुष र सदरमुकाक स्थित रामग्राम नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ का ३५ वर्षीय युवा र वडा नम्बर १८ की १५ वर्षीया बालिका रहेकि छिन् । सुस्ताको संक्रमितलाई भैरहवास्थित भीम अस्पतालको आईसोलेशनमा राखिएको छ भने रामग्राम नगरपालिकाको दुई संक्रमितलाई क्वारेन्टाईन मै राखिएको छ । उनीहरुलाई सदरमुकास्थित आर्दश माविको क्वारेन्टाईन मै राखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख गौरब ढकालले बताउनुभएको छ । अहिलेसम्म पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना संक्रमितको संख्या पाँच पुगेको छ ।